Fu,aad Shongole: "AMISOM waxaan dalka uga saareynaa sidi aan u saarnay UNISOM"
Fu,aad Shongole: “AMISOM waxaan dalka uga saareynaa sidi aan u saarnay UNISOM”
Updated About:253 days ago 0
Mid ka mid ah saraakiisha ugu sareyso Xarakada Al Shabab, Fu,ad Maxamed Shongole ayaa sheegay in ciidanka AMISOM ay uga saari doonaan dalka sidi loo bixiyey UNISOM.
Hadal uu shalay salaadi Jimcaha kadib u jeediyey dagaalyahano ka tirsan Al Shabab ayuu sheegay in dalka ay yimaadeen bilowgi 90-aadki ciidamo ka socday 50 dowladood kuwaas oo uu sheegay in ay dagaal la galeen dad uu ku sheegeen mujaahidiin.
“Waxaa yimid dalkeena oo kuso duulay 50 dowladood oo baxsaday UNISOM, sanadki 1993-ki, qabiil ma aheyn wixi la dagaalamay ee waxaa dagaalamay dad mujaahidiin ah ilaa loo celiyo halki ay ka yimaadeen.” ayuu yiri Fu,aad.
Fu,aad Maxamed Qalaf Shongole, ayaa ka mid ah 7 sarkaal oo ka tirsan madaxda Al Shabab kuwaasi oo uu Mareykanka madxahooda dul saaray malaayiin doolar oo la siin doono cidi soo sheegta halka ay joogaan.
Al Shabab ayaa dagaal kula jira ciidamada ka socda Midowga Africa ee jooga Soomaaliya kuwaas oo ka kala socda afar dal, sidoo kale waxay la dagaalamayaan ciidamada Dowlada Somalia iyo kuwa Ethiopia.